Article submitted by: minkyaw thuyein on 27-Oct-2012
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဘဏ်နဲ့ အာမခံ လုပ်ငန်&
ပြောပါရစေ ချစ်မိတ်ဆွေ ၊ ဖတ်ပါ ၊ မှတ်ပါ ၊ ကြော်ငြာပါ ၊ လိုတာကိုဆောင် မလိုတာကိုရှောင် ၊ အပေါင် မထားနဲ့ အပေါင် ဆုံး ဖြစ်သွားတတ်တယ် ။
မြန်မာ့ စီးပွားရေး အောင်မြင် စေဘို. ၊ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာ့စီးပွားရေး နဲ့ မြန်မာတဒွေ အကြောင်း သိတာလေးတွေရော မသိတာ လေးတွေပါ စဉ်းစားကြဘို. တင်ပြပါရစေ၊ ကိုယ်သိထားတာ ရှိရင်လဲ သူများကို ဝေငှကြပါ ။
(ရာဇ၀င် ကြွေူးကို ဆပ်ကြရအောင် သူရသတ္တိရှိတဲ့ မြန်မာတွေရယ် ဘယ်လို တိုက်ရမယ် ၊ သွေးနဲ.တိုက်ရမယ် ချွေးနဲတိုက်ရမယ် တဲ့) ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ အောင်သံတော် လို.ဘဲ ပြောပြောစစ်ကြွေးကြော် သံ လို.ဘဲ ဆိုခြင်ဆို ၊ ဒီ ကြွေးကြော်သံ အောင်သံတွေနဲ. ဒို. တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို. လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တယ် ဆိုတာ သိစေခြင်တယ် ၊ မမေ့စေလိုဘူး ၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်ပြီး အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံ ဆိုတာ သိထားကြစေလိုတယ် ။ စကားလုံး တလုံးခြင်းရ.ဲ လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကိုလဲ သိကြစေခြင်တယ် ။
ဒို.မြန်မာတွေ အခုလို ဆင်းရဲမှူ ကြူံတွေ.ရင်ဆိုင် နေရတာဟာ အနောက်တိုင်းသားတွေလို ပဒေသရာဇ်နယ်ချဲ့စံနစ် အမျိုးမျိုး ၊ ဖက်စစ် စံနစ် အမျိုးမျိုးတို.တွေကြောင့် ဒီစံနစ်တွေကို ဒို.တိတိကျကျ မကျင့်သုံးခဲ့လို. ၊ ယောင်ကန်းကန်း လုပ်ခဲ့ကြလို.ဘဲလိုဆိုရင် မှားလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး ၊
တနည်းအားဖြင့်ြေ့ပာရမယ်ဆိုရင် ကံ ၅ ပါး ကို သူများထက် ပိုပြီး စောင့်ထိမ်းလွန်း အားကြီးလို့ဘဲ လို.လဲဆိုနိုင်တယ် ၊ ထပ်ရှင်း ရအုံးမယ်ဆိုရင် သူတပါး ဥစ္စာပစ္စည်း သူများ သားမယား တို.ကို လုစား ခိုးစား တိုက်စား အတင်းသိမ်းပိုက်တာတွေ မလုပ်ခဲ့လို့ဘဲ၊ ဒါလောက်ဆို နားလည်လောက်ပါရဲ.၊ ဒို.တတွေ သူများလက်အောက် ၁၂၅ နှစ် နေခဲ့ရတယ် လူမျိုးရော နိုင်ငံပါ ကွယ်ပျောက် လု နီးနီးဖြစ်ခဲ့ ရတယ်ဆိုတာလဲ မမေ့နဲ့ ၊
မြန်မာတွေကို အင်္ဂလိပ်က လွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့တာချစ်သက်လက်ဆောင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာရော သိကြရဲ.လား ၊ ဒီလိုပြောလို.ရန် လိုတယ် မထင်နဲ့ မသိသူတွေကို သိအောင်ပြော ပြတာဘဲ ၊ ပြန်ပေးတာ ဒို.ပစ္စည်း သူတို.ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး ၊ မပေးတာတွေ တပုံကြီး ဘဲ၊ ဘယ်က စ ပြောရမယ်
တောင် မသိဘူး ၊ ဆိုလိုတာက မြန်မာကို အင်္ဂလိပ်က အကြောင်းရှာ တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ် ပက်စက် တဲ့အကြံနဲ. ကမ္ဘာ့ မြေပုံပေါ်ကနေ
ဖါယ်ရှားခဲ့တယ် ။ ဗမာတွေကို ကုလား ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ တာတွေဟာ မေ့ပျောက်လို့ရကောင်း ရိုးလား ၊ ဗမာမှန်ရင် ဒါတွေကို မမေ့ဘူး ၊ မမေ့အပ်ဘူး ၊ ကမ္ဘာကြေသော်လည်း ဥဒါန်းမကျေ ၊ မသမာ လူမျိုး မိစ္ဆာအင်္ဂလိပ်များကို စိတ်နာပါတယ် လို့တောင်ဆိုခဲ့တယ် ၊ ဗမာ မဟုတ် သူတွေကတော့ နာကြ ကျင် ကြတာ မဟုတ်တဲ့အပြင် အင်္ဂလိပ်ကို သူတို.အမေ ပေးပြီး သူတို.ပထွေးတောင် တော်လိုက်ကြလေရဲ.၊ တချိုကြတောလဲ လင်မရမှာ စိုးလို. အင်္ဂလိပ် ဆို အသေရရ အရှင်ရရ အမိဖမ်း ခဲ့ကြတယ် ၊ ကြုံလို.ပြောတာပါ နော် ။
ဒီလိုပြောလိုက်လို.ဘယ်သူ.ကိုမှ စစ်ကြေငြာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အဖြစ်ကိုသာပြောပြတာ ၊ နိုင်ငံမှာတွေ.ကြုံနေရတဲ့ နိုင်ငံ့အရေး အခက်အခဲဟာ အခုချိန်ထိ အမေကျော် ဒွေးတော် လွမ်းနေကြ
သူတွေကြောင့်ဘဲ ၊ ဒို.အားလုံးဟာ မခက်အခဲအားလုံးကို ကျော်လွှား အောင်မြင်စေဘို. စစ်ပွဲတရပ် ဆင်နွှဲနေသည့်အလား လိုအပ်တဲ့
စိတ်ဓါတ်အပြည့်အ၀နဲ.တညီတညွတ်ထဲ ဆောင်ရွက်ကြသင့်တယ် လို.သာပြောခြင်တာ ပါ ။ မလိုသော်ရှိ လိုသော်ရှိ သတိမလစ်စေဘို.ဘဲပေါ့ ။ တဦးပေါ်တဦး ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်အ၀ ယုံကြည်စိတ်ချ ဘို.ဆိုတာ
ကတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ၊ ခံရသူက ဗမာ နာရသူက ဗမာတွေဖြစ်တယ် ၊
စီးပွားရေး ဒါဏ်ခတ်မှူ ( အချို.) တွေ ရုတ်သိမ်းပြီ ၊ သမတကြီး ဦးသန်းစိန် ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို. ၀င်ခွင့်ဗီဇါ ပေးလိုက်ပြီ ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို မေရိကန်
ပြည်ထောင်စုမှာ ရောင်းချခွင့်ပြုလိုက်ပြီ အစရှိတဲ့ သတင်းတွေကြားရ တော့အမေ့ကို ကျေးဇူးတင်ရမလား ၊ အဖေ့ကို ကျေးဇူးတင်ရလား ၊ ပထွေးတို. မိဒွေး တို.ကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ရမလား မသိဖြစ်ရ သလို ၀မ်းသာရမလား ၊ ၀မ်းနဲရမလားနဲ. ငို၍ ရယ်၍ မရသော မျက်နှာဖြစ်ရ
တယ်ဆိုရင် ပိုပြီး မှန်ပါလိမ့်မယ် ၊
မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာ့စီးပွားရေး ကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှူတွေနဲ.လည်ပါတ်အောင် လောလောဆယ်လုပ်နေ ကြသလဲ၊ ကမ္ဘာ.နိုင်ငံအရပ်ရပ်ကို တင်ပို.ရောင်းချနိုင်ဘို. အဆင့်မီ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဘာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံက ထုပ်လုပ် နေသလဲ ၊ စီးပွားရေး ဒါဏ်ခတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ မြန်မာတွေ စုတ်ပြတ် ငတ်ပြတ် နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ တနည်းအားဖြင့် အကောင်းအမြင် ပြောရရင် မြန်မာတွေ ထမင်းရေ ချောင်းစီး ၊ ဘုံးဘော ဒလဟော မလုပ်ကြတော့ ဘဲ ချွေတာရေးဘက် ပြောင်းခဲတယ့် ၊ ပြောရမယ် ဆိုရင် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ သန်းကြွယ်သူဌေး ဆိုတာတွေ ပေါ်လာတယ် ၊ ဟိုတုန်းကတော့ရှိမရှိတော့ အသေအချာမပြောနိုင်ဘူး ။
ဒီလိုသူဌေး မျိုးတွေဟာ နိုင်ငံ ကြီးငယ် အားလုံးမှာ သူ.ဟာနဲ့သူ
ရှိနေကြတာဘဲ နိုင်ငံတခုရဲ. ဂုဏ် လို.ဆိုရိုး ရှိတယ် ၊ ပြောရမယ် ဆိုရင် နိုင်ငံ့ဂုဏ်အရပ်ရပ်ထဲ မှာ ဖါသယ် ဖါဂေါင်းတွေလဲ ပါတယ် ၊ ဒါကြောင့်ဘဲ ပြည့်တန်ဆာ ဆိုတဲ့ စကားရပ် ပေါ်လာတယ် သူတို.ဟာတိုင်းပြည် တခုရဲ. တန်ဆာပလာ တွေလို.တချိန်က လက်ခံခဲ့ကြတယ် ၊ တလင် တမယား စံနစ် မပေါ်ခင်က ၊ မိန်းမတွေ ကို လူစာရင်း မသွင်းခင်က အယူအဆတွေ ဖြစ်ပုံရတယ် ၊
ကွန်မြူနစ်တွေ ဆိုရှယ်လစ်တွေထဲမှာ မီလ္လယံနာ ဘီလ္လယံနာ ဆိုတာတွေ မရှိဘူးလို. ဘယ်ကွန်မြူနစ် ဘယ်ဆိုရှယ်လစ် ကမှ သစ္စာဆို ကျမ်းကျိန
်ုပြီး ပြောရဲမှာ လဲ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ယုံတော့ ၊
မြန်မာနိုင်ငံကလဲ လာကြပါ ။ လာကြပါ ရင်းနှီးမြုတ်နှံ လှဲ.ကြပါလို. တကျော်ကျော် ဘိတ်ခေါ်နေခဲ့တာ အခုမှမဟုတ် ၂၄ နှစ်ကြီးများ တောင်ကြာခဲ့ပါပြီး ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေပြပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးကို အသေလုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ဘို. ကြိုးစားခဲ့ကြတယ် ။ ဒီကိစ္စမှာ အတွင်းလူ ပါခဲ့တယ် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲလို.မေးနေစရာ လိုသေးသလား ၊ ထားပါတော့လေ ၊
မြန်မာနိုင်ငံနဲ.မြန်မာတွေ နာတာ ကတော့ အတော်နာတယ် ၊ မချိအောင်ဘဲ ၊ နာလွန်းလို. နာမှန်းတောင် မသိကြဘူးလို.ဆိုရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီအနာဟာ နာကျည်းမှူတရပ်အနေနဲ မြန်မာတွေရဲ.စိတ်ထဲမှာ ထာဝရ ကိန်းအောင်းနေလိမ့်မယ် ဖြစ်တယ် ၊
အရေးကြီးတာက အနာဂါတ်အရေး ၊ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ မြန်မာတွေ ဘယ်သူ ဘယ်လောက် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံနိုင်ကြမှာ လဲ ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ တဦးချင်းဖြစ်စေ ၊ ဖက်စပ်ဖြစ်စေ ၊ ကုမ္ပဏီတွေ ၊ သမ၀ါယမ စုပေါင်း လုပ်ငန်းတွေ စသဖြင့်ပေါ့လေ ၊ ရင်းနှီး မှူဆိုတာဟာ ငွေကြေးလိုအပ်တယ် မရှိမဖြစ်ဘူး ၊ ဒိထက် ပိုပြီး အလိုကြီးလိုအပ်တာ
ကတော အသိပညာ အတတ်ပညာ တွေဘဲ ၊ အဲဒီ ၂ ခုရှိရင် လိုအပ်တဲ့ ငွေကိုရရှိနိုင်တယ် ဆိုရင် ယုံတော့ ၊
ဘဏ်လုပ်ငန်း ၊ ငွေချေးလုပ်ငန်းတွေ ငွေကြေးအဖွဲ.အစည်းတွေက အသိပညာ အတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသူတွေရဲ အစီအစဉ်တွေ ကို လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေး မတည်ပေးလိမ့်မယ်လဲ ဖြစ်တယ် ၊ သူတို.စိုက်ထုတ် မတည်ပေးတဲ့ ငွေကို အတိုးနဲ့တကွ အချိန်ကန်.သပ် ချက်တွေနဲ.သေချာပေါက် ပြန်ရအောင် ကြိုးချည်ကြလိမ့်မယ်လဲ ဖြစ်တယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်ခေတ်က ရှိဘူးတဲ့ ချစ်တီးယား လို လိုင်စင်ရ
ငွေချေး သူတွေ နေ.ပြန်တိုးနဲ.ငွေချေူးငှါး သူတွေအကြောင်း တစေ့တကြောင်း ကြားဘူးကြ မှာပေါ့ ၊ အခုခေတ်မှာ လိုင်စင်ရရ မရရ ငွေတိုးချ နေသူ မြန်မာ ချစ်တီးယားဘယ်နှယောက်ရှိမယ်ဆိုတာ အစိုးရတောင် သိမယ်မထင်ဘူး ။ ရောင်းသူ ၀ယ်သူ ကျေနပ်ကြရင် ပြီးတာဘဲလို. ဆိုနိုင်ပေမဲ့။ စား ၀တ် နေရေး ကြပ်တည်းရတာဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်နိုင်တာမျိူး ဆိုတာကိုတော့ အစိုးရ ဆိုတာတွေ သိပါလိမ့်မယ် ။
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာငွေကြေးအဖွဲ.နဲ. တခြားနိုင်ငံ ဘဏ်တွေ ငွေကြေးအဖွဲ. တွေလဲ အတူတူပါဘဲ ၊ အခုခေတ်မှာ အပေါင်ဆိုင် လို. လူသိများတဲ့ တရားဝင် ငွေချေးဌာန မပြောနဲ့၊ အစိုးရရဲ. အမတော်ကြေး အထောက်အပံ့ ဆိုတာတောင် အာမခံ အပေါင်ပစ္စည်း တင်ရတယ် ၊ ရွှေငွေ လက်ဝတ်ရတနာ ၊ ထွက်တဲ့ သီးနှံ ဆန်စပါးနဲ.ပြန်လည်ပေးစပ်ရတာတွေရှိတယ် ။ မလိုတမာ တွေ အယုတ်တမာ ပြောဆို ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်နေကြတာက အစိုးရဟာ လယ်သမားတွေဆီ က သီးနှံစပါးတွေကို မတရားအတင်း သိမ်းယူနေသတဲ့ ။
လယ်သမားမှာ အာမခံ အပေါင်တင်ဘို. မရွှေ.ပြောင်း နိုင်သော ပစ္စည်းအဖြစ် သူ.လယ်ဘဲရှိတယ် ၊ ဒါတောင် သူပိုင်ခြင်မှပိုင်အုံးမှာ၊ ယဲ့ယဲ့သာရှိတဲ့ သူ.တဲစုတ်ကို အပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ် လက်မခံနိုင်ဘူးလေ ၊ ဘယ်လောက်လုပ်ရ ကိုင်ရ ခက်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားသာ ကြည့် ကြပေတော့ ။ အိမ် မြေ ယာ ၀ယ်ဘို. နှစ်ရှည်နဲ့ ငွေချေးဌား လုပ်ငန်း ဘယ်လောက် တိုးတက်အောင်မြင်နေသလဲ ဆိုတာ တော့ မသိတာ
အမှန်ဘဲ ၊ အိမ်ယာ လုပ်ငန်းတွေ မြို.သစ်တွေနဲ.တိုးချဲ.နေတာတွေ
ကတော့ တင်းပြည့်ဘဲ အားရစရာ ။ ၂ ဦး ၂ ဖက် အကျိုးခံစားရမှူ ကတော့ ရှိမှာဘဲ ။
အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က မြန်မာ့ လယ်တွေ မြေတွေ ချစ်တီးယား လက်ထဲရောက် ၊ မြန်မာတွေ လူမွဲဖြစ်ရဘူးတာ ကိုမှတ်မိကြသူတွေ ရှိမယ် ။ ယူတော့ တပြုံးပြုံး တောင်းတော့ မုန်း ဆိုတဲ့စကားအတိုင် ၁၉၄၈ ခု လွတ်တပ်ရေးရတဲ့အချိန်ကစပြီး တရွေ.ရွေ.တဖြေးဖြေး မြန်မာ့လက် ပြန်ရောက်လာတဲ့စီးပွားရေးဟာ ၁၉၆၂ ခု နောက်ပိုင်းမှာ တဟုန်ထိုးရောက်လာတယ် ဆိုရပေမဲ့ တကယ်တော့ မြန်မာ တိုင်းရင်း
သားတွေ လက်ထဲမဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ လက်ထဲကိုရောက်
ခွေးဖြစ်မှတော့ ချီး ကြောက် နေလို.မဖြစ်ဘူး ၊ အရိုးများများ ချီးခါးခါး မြန်မာ့စီးပွာရေးကို မြန်မာ ဆိုတာတွေက မြန်မာတွေအား လုံးအတွက် လုပ်ကြရတော့ မယ်ဖြစ်တယ် ။ မြန်မာ ဆိုတာနဲ့ဘဲ ကျေနပ်ကြရတော့ မယ် ။ အရင်းအနှီး မြုတ်နှံ ဘို.လိုအပ်တဲ့ မတည်ငွေ ၊ ငွေကြေး လည်ပါတ်နှိုင်အောင် နိုင်ငံတော်ဘဏ် အပါအ၀င် ဘဏ်နဲ့ ငွေချေးဌား လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး ကိုရော ငွေချေး ယူသူ ကိုပါ မနစ်နာကြရအောင် ကာကွယ်ပေးမဲ့ ဥပဒေတွေကို နိုင်ငံတော်က တိကျစွာပြဌာန်း ပေးရ
ကြွေးတင် ဘုရင်ဆပ်လိမ့် ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားဟာ ရေ မြေ တောတောင် မြေတွင်း မြေပေါ် သယဇါတ ရွှေတွင်း ငွေတွင်း ပယင်း ဒုတ္ထာ တွေကို ဘုရင် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော် က ပိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင် စရာရှိတယ် ၊ နိုင်ငံသားတွေက နိုင်ငံတော်ကို အခွန်ဘဏ္ဍာ မှန်မှန် ဆက်မှ ဖြစ်မယ် ၊ ဆက်ပြောရရင်တော့ အထက်ကပြောခဲ့သလိုဘဲ သူတပါးတွေလို နယ်ချဲ.ပဒေသရာဇ် ဖက်စစ်စံနစ် ၀ါဒ ကို အနုနည်း အကြမ်းနည်း နဲ.သွတ်သွင်းနိုင်မှသာဖြစ်လိမ့်မယ် ၊
ရေ မြေ တော တောင် တွေ ကို ဘယ်သူပိုင်သလဲလို. မေးရင် ကလေးဆန် လိမ့်မယ် ၊ ကလေးအမေးကို လူကြီးတွေ ဖြေနိုင်မယ် လဲ မဟုတ် ၊ ပေးတဲ့အဖြေကိုလဲ လူတိုင်းက တညီတညွတ်ထဲ လက်ခံနိုင်ပုံလဲ မရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ ရောက်နေတယ်၊ ကြက်ခေါင်းဆိပ် မခံ မေးခွန်း ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ရေ မြေ တော တောင် တွေ ကို ဘယ်သူက ပိုင်ပိုင် နိုင်ငံတော် ကို သတ်မှတ်တဲ့ ရေ မြေ တော တောင် အခွန်ဆိုတာ မပေးမနေ ပေးရတယ် ။ မြန်မာ့စီးပွာရေး အကြောင်းဆက်ရရင် အခု.ဖွဲ.စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံပိုင် သိမ်းယူခြင်း မပြု ပါဘူး လို.ဆိုထားတယ် စဉ်းစားစရာဘဲ ။ပြောရမှာတွေ
ကလဲ တပုံကြီးဘဲရှိသေးတယ် ။ နောက်အပိုင်းတွေမှာကြုံသလို ပြောသွားမယ် ။
မြန်မာ လူမျိုးတို.ရဲ. အလေ့အကျင့် ထုံးစံဖြစ်နေတဲ့ ပိုက်ဆံ ကို ခေါင်းအုံးအောက် မှို.ယာအောက် မြေအိုးထဲထည့်ပြီး အိမ်အောက် ညောင်ပင် ကြီးအောက် မြှုတ်ပြီး စုထားတတ်တဲ့ အတွက်မြန်မာ့
စီးပွားရေး ပိုင်းမှာ ငွေကြေးလည်ပါတ်မှု မရှိအောင် ဖြစ်နေရလို. စီးပွားရေးဟာ အဖက်ဖက်က ကျဆင်းနေရပါတယ် ၊ ငွေစက္ကူဟောင်းရင် မကိုင်ခြင် ၊ မဟေယင်ူမောင်လဲမကိုင်နိုင် ၊ ဘယ်ဟာမှ ကိုယ့်အပစ်
မဟုတ် သူများလုပ် လို.သာ ဖြစ်ရတာရပါ လို. ကိုယ်လွတ်ရုံးနေတဲ့ မြန်မာတွေ အနာဂါတ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနောက်တိုင်း စံနစ်ဘဲ ခေါ်ခေါ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးစံနစ်ပဲ ဆိုဆို နဲ. အန်ဝင်ဂွင်ကျ ဘို.ဆိုတာတော့ စိတ်လေးမိသေးတယ် ၊ အချိန်တန်ရင်သူ.ဟာနဲ. သူ ဖြစ်သွားလိမ်.မယ်ပေါ့ လေ ဟုတ်လား ။
လူတွေဟာ အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းနဲ.တွေ.ကြုံ မရှူနိုင် မရှိုက်နိုင် မျက်ဖြူစိုက်မှဘဲ ပြောင်းလဲ ဘို.လိုပြီဆိုတာကို သိလာကြ တယ် ၊ အပြောင်းအလဲ လပ်လာကြတယ် တဲ့ ၊ မြန်မာတွေကတော့ ရိုးရိုးနဲ့
လွယ်တဲ့ကိစ္စကိုခက်အောင် ၊ ခက်တာကိုဘာမှမလုပ်နိုင် အောင် လုပ်ပစ်တတ်ကြတယ်လို. လူကြီးတွေ ပြောတာကို ကြားဘူးတယ် ။
သံသရာ တပါတ် ပြန်ကျော့ လာပြီလား ၊ သမိုင်းတပါတ် ပြန်လှဲ့လာပြီ
လား ။ ရာဇ၀င် ကြွေူး ဆပ်ကြရအုံးတော့မှာလား ။
ချေးငွေအရင်းရော အတိုးပါ ပြန်မဆပ်နိုင်လို. အာမခံ အပေါင်ခံ ပစ္စည်း
ကို ရုံးတင် တရားစွဲပြီး ငွေရှင်က သိမ်းဘို. ဆောင်ရွက်လာ ရင် ၂ ဦး ၂ ဖက် အကျိုးမဲ့ မဖြစ်ရအောင် မဟော်သဓ သတို.သား ၊ အမယာဒေ၀ီ တို.ကို ခေါ်ရလိမ့်မယ် ထင်တယ် ။
ဒီနေရာမှာ ပြည်ထောင်စုအာမခံ စံနစ်နဲ.လုပ်ငန်း ၊ တခြား အာမခံ လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုး ဘယ်လောက် တွင်ကျယ်စွာ ဆောင်ရွက်နေ တယ် ဆိုတာ မျက်မြင်တွေ.ရတော့မယ် ၊
ဒီနေရာမှာ တခန်းရပ်လိုက် အုံးမယ်နော် ပျော်ပျော်ပါးပါး ပေါ ။့